အောက်တိုဘာ ၁၈ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်လာမယ့် Huawei Enjoy 10 | Net Guide
Home News International News အောက်တိုဘာ ၁၈ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်လာမယ့် Huawei Enjoy 10
အောက်တိုဘာ ၁၈ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်လာမယ့် Huawei Enjoy 10
Huawei ရဲ့ Enjoy စီးရီးဖုန်းတွေလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဈေးသက်သာမှု တခုတည်းသာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့အတူ ရွေးချယ်စရာများတဲ့ ပုံစံကိုပါ တွေ့ရမှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Huawei အနေနဲ့Enjoy9စီးရီးတွေကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး Enjoy 9, Enjoy9Plus တနည်းအားဖြင့်( Enjoy 9e နဲ့ Enjoy 9s ) တို့ကို ဈေးကွက်တင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာတော့ တရုတ်နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီးဟာ Enjoy 10 Plus ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ကျန်တာကတော့ Enjoy 10 ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဖုန်းကိုတော့ လာမယ့် ၁၈ ရက်နေ့ တရုတ်မှာ မိတ်ဆက်ပေးတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။Enjoy 10 မိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကို ဟွာဝေးရဲ့တရားဝင် ဝီဘိုအကောင့်ကနေ ထုတ်ပြခဲ့ပြီး ဖုန်းမှာပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုပါ ရေးသားထားပါတယ်။
မြင်လိုက်ရတဲ့ ပုံစံအရ Enjoy 10 ဖုန်းမှာ punch-hole display နဲ့ဖြစ်ပြီးမြင့်မားတဲ့ screen-to-body ratio ကိုထည့်ပေးထားမှာပါ။ အနောက်ဘက် ဒီဇိုင်းကတော့ gradient panel နဲ့ဖြစ်ပြီး dual cameras. တပ်ဆင်ထားမှာပါ။ ကင်မရာတွေကို ထောင့်ဘက်မှာ ဒေါင်လိုက်အနေအထားနဲ့ တပ်ဆင်ထားမှာပါ။ နောက်ဘက်မှာ physical fingerprint sensor ကိုမတွေ့ရတာကြောင့် in-display fingerprint sensor ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
TENAA မှာတင်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ 6.39-inch IPS LCD display မှာ Kirin 710F chip သုံးထားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကင်မရာတွေကတော့ 48MP နဲ့ 8-megapixel တွေပါ။ အရှေ့ဘက် punch-hole ထဲမှာ8-megapixel selfie ကိုထည့်ပေးထားပါလိမ့်မယ်။ 3,900mAh ဘက်ထရီနဲ့ဖြစ်ပြီး fast charging ထောက်ပံ့ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္ေန႔မွာ မိတ္ဆက္လာမယ့္ Huawei Enjoy 10
Huawei ရဲ႕ Enjoy စီးရီးဖုန္းေတြလို႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ေဈးသက္သာမႈ တခုတည္းသာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ထူးျခားတဲ့ ဒီဇိုင္းနဲ႔အတူ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားတဲ့ ပုံစံကိုပါ ေတြ႕ရမွာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က Huawei အေနနဲ႔Enjoy9စီးရီးေတြကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး Enjoy 9, Enjoy9Plus တနည္းအားျဖင့္( Enjoy 9e နဲ႔ Enjoy 9s ) တို႔ကို ေဈးကြက္တင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီႏွစ္မွာေတာ့ တ႐ုတ္နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီးဟာ Enjoy 10 Plus ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္က်န္တာကေတာ့ Enjoy 10 ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီဖုန္းကိုေတာ့ လာမယ့္ ၁၈ ရက္ေန႔ တ႐ုတ္မွာ မိတ္ဆက္ေပးေတာ့မယ္လို႔ သိရပါတယ္။Enjoy 10 မိတ္ဆက္ဖို႔အတြက္ကို ဟြာေဝးရဲ႕တရားဝင္ ဝီဘိုအေကာင့္ကေန ထုတ္ျပခဲ့ၿပီး ဖုန္းမွာပါဝင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုပါ ေရးသားထားပါတယ္။
ျမင္လိုက္ရတဲ့ ပုံစံအရ Enjoy 10 ဖုန္းမွာ punch-hole display နဲ႔ျဖစ္ၿပီးျမင့္မားတဲ့ screen-to-body ratio ကိုထည့္ေပးထားမွာပါ။ အေနာက္ဘက္ ဒီဇိုင္းကေတာ့ gradient panel နဲ႔ျဖစ္ၿပီး dual cameras. တပ္ဆင္ထားမွာပါ။ ကင္မရာေတြကို ေထာင့္ဘက္မွာ ေဒါင္လိုက္အေနအထားနဲ႔ တပ္ဆင္ထားမွာပါ။ ေနာက္ဘက္မွာ physical fingerprint sensor ကိုမေတြ႕ရတာေၾကာင့္ in-display fingerprint sensor ထည့္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
TENAA မွာတင္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ 6.39-inch IPS LCD display မွာ Kirin 710F chip သုံးထားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကင္မရာေတြကေတာ့ 48MP နဲ႔ 8-megapixel ေတြပါ။ အေရွ႕ဘက္ punch-hole ထဲမွာ8-megapixel selfie ကိုထည့္ေပးထားပါလိမ့္မယ္။ 3,900mAh ဘက္ထရီနဲ႔ျဖစ္ၿပီး fast charging ေထာက္ပံ့ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
Previous articleHelio P90 Chipset အသုံးပြုထားတဲ့ OPPO Reno2 Z မကြာမီ ထွက်လာမည်
Next articleအောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းလောက်မှာ စတင် ရောင်းချလာမယ့် Huawei Mate X
Devialet နှင့် ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့ စမတ်စပီကာ Sound X ကို Huawei ကြေညာ